Somali News | FXCC
Home / Waxbarashada & Cilmi-baarista / Research / Forex News
FXCC waxa ay ku dadaaleysaa in ay ganacsatada FX joogtana si joogto ah ugu wargaliyaan daabacaadda: jabinta wararka, ra'yiga, xaqiiqooyinka, tirooyinka, digniinta iwm. qaybta wararka ee FX. Waxaan sidoo kale kugula socodsiin doonnaa, iyada oo loo marayo wacyigalinta warbaahinta bulshada, iyada oo la xidhiidha dhamaan daabacadayada.
Dhammaan ganacsatada qibrada leh waxay markhaati ka bixin doonaan sida munaasabadda dhaqaalaha ah iyo saameynta sare saameynta warbaahinta qiimaha lacagta. Haddii aad tahay maqaarka; oo laga yaabo inay isticmaalaan habab ganacsi oo isdaba-joog ah iyo la-taliyeyaal khabiir ah si ay u ganacsadaan suuqyada FX, kuwaas oo u baahan in ay ka jawaabaan iftiinka dhaqso. Ama waxaad tahay qof ganacsade ah; oo qaadanaya habab badan oo la tixgeliyo ka hor inta aan la xirin ama laga leexin jihada ganacsiga, haynta xafladaha wargeysyada ayaa ah arrin muhiim ah oo lagu guuleysto marka ganacsiga FX.